Maitiro ekuziva kana yangu Android iine hutachiona ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Kuziva sei kana yangu Android iine hutachiona
Kuziva sei kana yangu Android iine hutachiona, nekuda kwebasa reGoogle Play Dzivirira, yedu Android smartphones ivo vanogara kuchengetedzwa kubva kune malware uye mamwe maapplication ane ngozi, asi zvinogona kuitika kuti tinoramba tichitaurirana navo uye tinopinda mumatambudziko.
Mazuva mashoma apfuura takakuudza nezve izvi Android hutachiona iyo isingakwanise kubviswa, saka zvinove zvakakosha kwazvo kuyedza kudzidza hunyengeri hushoma kuti urege kusangana neanokuvadza maapplication.
Zvisinei, usati wakuratidza mamwe matipi uye maitiro akanaka ku chengeta yako Android Smartphone yakachengetekaNgatiedzei kunzwisisa kuti ndedzipi mhando dzemarware dziripo uye hunhu hwavo.
Iko kune angangoita manomwe akajairika marudzi emarware pane nhare mbozha
Kana tichitaura nezve "mavhairasi" tinoreva chikamu chakapamhamha chekushandisa, kusanganisira:
Trojan, inonyanya kufarirwa pakati pezvirongwa zvakashata zviripo mukutenderera. Iyo Trojan inozvishandura pachayo seyakafanira kunyorera kuti uwane dzimwe nzvimbo dzeanoshanda system;
El spywareKazhinji inoshandiswa kuba ruzivo rwakavanzika senge mapassword nemabhangi macode, spyware inowanzohwanda kuti irarame;
Malware kuburikidza neSMS, kutumira nekutora maSMS zvichikonzera mutoro wakakura wezvemari;
adware, echinyakare pop-ups aripo pane akawanda masayiti anokumbira mushandisi kudzvanya paari kuti awane mamwe masayiti kana kurodha kunyorera;
Malware ine midzi yekuwanaPaunenge uchinge uri mukati mefoni, mukana unopihwa "midzi mirairo" yekukanganisa zvine mwero kuhurongwa hwekushandisa;
ransomware, inonyora uye inobata mafaera parunhare sevasungwa nevimbiso yekuadzimisikidza pamubhadharo unowanzo dhura kwazvo;
Banking malware, senge spyware, asi zvine njodzi, vasori pazviito zvevashandisi kuba mazita avo ekubhengi account.
Izvi ndizvo zvinogona kunzi iyo hutachiona hwakajairika pane nharembozha. Nepo vazhinji vachigona kufamba-famba murima, pane zviitiko apo iwe unogona kutaura kana foni yako ichitapukirwa nehumwe hutachiona hwawangoona.
Kana ukasangana nema-pop-ups akasarudzika, foni yako inogona kunge yakakanganiswa neAdware
Adware inopararira nekutenda kune vasina hanya vashandisi vachitsvaga pane zvimwe popup windows. Dzimwe nguva zvinoitwa nekukanganisa, vamwe nekuda kwekuda kuziva, asi mhedzisiro yacho ingangoita yakafanana: kutapudza yako Smartphone neAdware.
Kana ukangoerekana waona mafashama nemapop-ups kutambura kunyangarika, kunyangwe pachiratidziro chemumba cheiyo Android Smartphone, zvadaro zvave zvakadaro nyajambwa weadware.
Iyo yakanaka tsika yekutarisa data traffic traffic kuburikidza neyakafanira Android marongero epaneru
Vamwe zvirongwa zvakaipa ivo vanofamba paired ne adware, vachitevera mashandiro ayo ekupedzisira anounza mari kune yekutanga kuburikidza nhevedzano yekudzvanya kumashure. Aya mashandiro zviri pachena ane mutengo maererano nekushandisa kweGB kunowanikwa kune yako yefoni kupihwa, saka kana iwe ukaona a kuwedzera kwakasarudzika kwedata traffic yekushandisa, zvingangoita kuti yako Smartphone yatapukirwa nemarware.
Tarisa pafoni yako bhiri
El SMS malware inogona kudzivisa inouya kana ichibuda maSMS uye kuendesa ivo kunotora nhamba. Kazhinji kazhinji, iyi malware inogovaniswa kuburikidza neemail ine chinongedzo chinoratidzika kunge chinobva kune vanovimbana navo. Bhiri repamusorosoro rinogona kuratidza kuti watapukirwa neSoftware yakaipa.
Dhawunirodha chete zviri pamutemo maapplication
Kuti udzivise kusangana ne mauto, zvakakosha kuti utore chete mafomu akachengeteka. Iyo Google Play Store Zvakaoma kutenderera, asi kana ukasangana nechishandiso "chakati", izano rakanaka kutarisa mhinduro yakapihwa nevashandisi.
Mamwe maTrojans anozvishandura semashandisirwo anozivikanwa, kunyange kuteedzera iwo icon uye nekungochinja mavara mashoma ezita.
Kudonhedza bhatiri kudonha kunogona kunge kuri nekuda kwekuvapo kwemarware
Kana iyo Yako Smartphone bhatiri rinotanga kupera husiku uye une chokwadi chekuti hapana dambudziko remuviri, zvingangove kuti watapukirwa nemarware. Ehe foni yako inopisa kunyangwe isinga shandiswe, nechidzitiro chakakiiwa, pamwe iyo yekupedzisira app yawakadhirodha iri malware chaiyo.
Zvaunofanira kuita kana yako Smartphone yatapukirwa
Chinhu chekutanga kuita ndeche pakarepo bvisa iyo Smartphone app. Dzivisa kuisa maAPK kubva kune asingazivikanwe masosi, kunyangwe saiti iwe yaunoda kuidhawunirodha kubva inoita kunge iri pamutemo. Shandisa chete Google Play Chitoro sosi sosi yekumisikidza mapurogiramu aunoda uye chenjera kune ese maapplication anoda kuwana zvikamu zvefoni yako izvo zvine chekuita navo.
Semuenzaniso: iyo QR kodhi yekuongorora application inofanira kukumbira mvumo yekuwana iyo kamera, kwete iyo yekudyidzana runyorwa, nzvimbo, odhiyo uye maikorofoni. Chekupedzisira, dzidza ku ita mabhakkuta enguva dzose emafaira ako akakosha paGoogle Drive kana ako akachengetedzeka epamhepo ekuchengetedza masevhisi.
Google Chrome inoratidza favicon mune nhare yekutsvaga mhinduro pa Android